xasan kaahiye – Page 4 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
December 25, 2016	Leave a comment 32 Views
Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ) ayaa kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho 15 – 24 Disembar 2016-ka. Kulanka waxaa shir-guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka soo qayb galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari; Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke; Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka, Mudane Maxamed Cumar Carte; Madaxweynaha Puntland, Mudane Cabdiweli ...
December 25, 2016	Leave a comment 39 Views
Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole, waa siyaasi Soomaaliyeed oo dhashay sanaddii 1945-tii, waxaa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii dhexe ee marxuum Maxamed Siyaad Barre,kadib bur-burkii, waxa uu u qaxay dalka Australia, kadibna waxaa uu noqoday madaxweynaha maamulka Putland oo markii dambe uu doorasho kaga guulleystay Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas oo isna mar soo noqday ra’iisul wasaaraha Soomaaliya. Mudane ...
Goormee ayaa la dhaarin doonna Xildhibaanada Cusub Kalfadhiga ugu horeeyo goormee ayuusa dhici doonna????
December 25, 2016	Leave a comment 34 Views
Maamulka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa caawa shaaciyey xiliga rasmiga ah ee ay dhaceyso munaasabadda furitaanka Kalfadhiga Golaha Shacabka. Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi (Buux) ayaa caawa shaaciyey in Munaasabadda furitaanka Baarlamaanka loo asteeyey in ay dhacdo maalinta Talaadada ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 27ka December 2016, saacadda 09ka subaxnimo. “si waafaqsan qodobka 66aad, farqadiisa ...